बुधबार, असार २३, २०७८ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । ओलम्पिकको आयोजना स्थानीय ओलम्पिक कमिटी (एलओसी) र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) मिलेर गर्ने भएपनि एथलेटिक्स खेलको दर्ता नियम, प्रक्रिया निर्धारण र सञ्चालन गर्ने संस्था अन्तराष्ट्रिय एसोसियसन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आईएएएफ)ले गर्ने हो ।
कुनैपनि विधा छनोटको मापदण्ड नपुगेका राष्ट्रिले पनि कुनै एक विधामा एक जना खेलाडीले भाग लिन पाउने अधिकार दिएको हुन्छ । तर १० हजार मिटर रेस–वाक, ३ हजार मिटर स्टेबल चेस र कम्बाइन इभेन्ट रिलेमा छनोट नभई भाग लिन दिईदैन । म्याराथन, फिल्ड ईभेन्ट लगायत करिब आधा जस्तो विधामा सहजै भाग लिनका लागि खुल्ला हुन्छ । यी विधामा भाग लिन दिने निर्णय आईएएएफको प्राविधिक कमिटीलेनै गर्दछ ।
भाग लिन पाईने खेलको दर्ता, समय सिमा, प्रक्रिया आदि सम्बन्धित सबै आईएएएफले जानकारी स्थानीय ओलम्पिक कमिटीमार्फत सहभागी सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र आफ्नो सदस्य राष्ट्रका एथलेटिक्स संघलाई कम्तिमा ५–६ महिना अगावै टिम म्यानुअलमार्फत पठाईसकेको हुन्छ ।
खेलाडी छनोट गर्ने काम एथलेटिक्स संघको हो भने खेलाडी दर्ता गर्ने काम ओलम्पिक कमिटीको हो । संघले छनोट गरेको खेल र खेलाडी सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक रेकर्ड र कागजात एनओसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भने एनओसीले सबै अन्य कागजात समयमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
यसमा अन्तराष्ट्रिय एथलेटिक्स संघको दर्ता मिति अन्य खेलको दर्ता मिति भन्दा अलग रहेको छ । युनिभर्सियालिटी कोटा अन्तर्गत म्याराथन र रेस–वाकको हकमा दर्ता २३ मेदेखि सुरु भएर ३१ मे २०२१ अन्तिमसम्म हो ।
जुन २ सम्ममा खेलाडीको दर्ता स्विकार्य भएको हो कि भएन भनेर अन्तराष्ट्रिय एथलेटिक्स संघले स्थानीय ओलम्पिक कमिटीमार्फत नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेपाल एथलेटिक्स संघलाई पठाईसकेको हुन्छ । जुन २१ मा छनोट नभएका खेलाडी अन्य एथलेटिक्स विधामा भाग लिने दर्ता गर्ने अन्तिम दिन हो । जुन २९ खेलाडी स्विकार्य भएको हो कि भएन भनेर जानकारी दिने अन्तिम दिन हो । जुलाई १ सम्पुर्ण खेलाडी छनोट मापदण्डबाट आएका र युनिभर्सियालिटी कोटाबाट आएका खेलाडीको पक्का भएको सूची पठाउने अन्तिम दिन हो । जुलाई ५ टोकियो २०२० अन्य सबै खेलहरुको पनि इन्ट्री गर्ने अन्तिम दिन हो । खेलाडी दर्ता र समय सिमा सम्बन्धित कुनै गल्ती भएका त्यसको जिम्मेवार एनओसी हुन्छ ।
प्राविधिक कारणले वा छनोटका प्रक्रिया, समय, प्रतियोगिताको बारेमा सम्बन्धित उचित जानकारी उपलब्ध गराई प्राविधिक कमिटीलाई सन्तुष्ट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल एथलेटिक्स संघको हुन्छ । त्यसैले एथलेटिक्स संघलेनै छनोट कार्यक्रम र खेलाडी र प्रतियोगिता गरेको हुन्छ । यसमा चुकेको खण्डमा एथलेटिक्स संघको कमजोरी र दोष मान्न सकिन्छ । साथै एथलेटिक्स संघले आईएएएफ खेलाडी स्विकार्दै भएको पत्रको जानकारी पठाईसकेको हुनुपर्दछ ।
मुख्य प्रश्न समयमा खेलाडीको नाम गयो कि गएन ? सो खेलाडीको नाम के–के कारणले स्विकार भएन ? अस्विकार भएको खबर अघिनै पाइसकेको भए नीजलाई अर्को इभेन्टमा वा अन्य कुनै राम्रो खेलाडीलाई अन्य स्पर्धाको लागि दर्ता प्रक्रिया किन अघि बढाईएन ? र यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने हो ।
जे भएपनि सत्य कुरा गोपीले यस पटकको ओलम्पिक खेल्न पाउदैन । तसर्थ लामो तयारी गरेको र नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले छनोट गरेर आश्वासन दिएको खेलाडीको मनोबल थप गिर्न नदिन तत्काल वर्ष दिनभित्र १–२ वटा अन्तराष्ट्रिय म्याराथनमा भाग लिन लगाउने बन्दोवस्ती गरि क्षतिपूर्ति सहितको मोटो रकम खेलाडीलाई दिईनुपर्दछ । गोपीबाट नेपाली खेलकुदले म्याराथनमा राम्रो नतिजा अपेक्षा गरि राखेको छ ।
(राजवंशी नेपाल एथलेटिक्स संघका पूर्व महासचिव हुन् । राजवंशीले महासचिवको रुपमा यसअघि ओलम्पिक लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी सहभागी गराएको अनुभव छ ।)
सहिद स्मारक लिग 'ए' डिभिजन : दोस्रो चरण तथ्यांकमा